I-Huawei P30 Lite: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Izolo iHuawei P30 kunye neP30 Pro bezisiwe ngokusemthethweni kumsitho eParis. Sisiphelo esitsha esihlaziyiweyo sophawu lwesiTshayina, esibizwa ukuba silawule eli candelo kwintengiso ye-Android. Into eqhelekileyo kukuba kwezi nkcazo-ntetho kukho iimodeli ezintathu, enye yazo iyimodeli yeLite, into elula. Nangona kwinkcazo yezolo besibona kuphela ezi modeli zimbini. Kodwa iHuawei P30 Lite ngoku isemthethweni.
Sifumana Uhlobo oluthile olusikiweyo lweemodeli zokugqibela. Nangona le modeli ithiwe thaca njengenketho enkulu. Ngokwendlela yoyilo, ukubheja kweHuawei P30 Lite kuyilo olufana nezinye iimodeli. Sikwabona ubukho beekhamera ezininzi kuyo.
Ngale ntsasa ezinye iinkcukacha zomnxeba ziye zavuza. Emva kweeyure ezimbalwa sele sinazo zonke iinkcukacha malunga neprimiyamu entsha yaphakathi kwinqanaba kuluhlu lwegama laseTshayina. Njengoko kuqhelekile kwiifowuni ezikweli candelo, isebenzisa iKirin 710 njengeprosesa ngaphakathi.
1 Iinkcukacha zeHuawei P30 Lite
Iinkcukacha zeHuawei P30 Lite
Uyilo alutshintshi kakhulu xa kuthelekiswa neemodeli ezimbini zokugqibela. Isikrini esinotshi emile njengokwehla kwamanzi, esingalawulekiyo kwiscreen kakhulu. Ukongeza, uphawu luye lwacutha ukunciphisa izakhelo ezichaziweyo kwiscreen esivumela ukusetyenziswa okungakumbi ngaphambili kweso sixhobo. Emuva sifumana ikhamera kathathu, ngokungathandabuzekiyo eya kuba yenye yeefowuni. Oku kukucaciswa kweHuawei P30 Lite:
IsikriniI-IPS / LCD ene-intshi eyi-6,15 ene-FullHD + Resolution (2.312 x 1.080 pixels)
Inkqubo: IKirin 710
Cámara trasera: 24 + 8 + 2 MP
Ikhamera yangaphambiliI-32 MP
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie ene-EMUI 9.0.1
Conectividad: I-WiFi 802.11 a / c, iBluetooth 4.2, i-GPS, i-GLONASS, i-USB-C, i-headphone jack
Ubukhulu: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm
Icandelo lokufota lithembisa ukuba ngaphandle kwamathandabuzo yeyona nto iphambili kwiHuawei P30 Lite. Ukongeza ekuboneni ukuphucuka okucacileyo kuyo xa kuthelekiswa nemodeli yonyaka ophelileyo. Kule meko, ikhamera engemva kathathu iyasetyenziswa, xa kuthelekiswa nekhamera ephindwe kabini kunyaka ophelileyo. Yindibaniselwano yee-sensors ezahlukeneyo. Kwelinye icala, sinesivamvo esingama-24 se-MP esine-f / 1.8 ebanzi, kunye ne-8 MP ye-wide-wide-angle-angle sensor kwaye okwesithathu sine-2 MP ToF sensor.
Kwakhona, Iikhamera zefowuni zixhotyiswa bubukrelekrele bokufakelwa, enkosi kwi-NPU eseKirin 710. Ngale ndlela, iindidi zemifanekiso ezingama-22 zinokuchongwa kunye neendidi ezisibhozo kwimeko yekhamera yangaphambili yefowuni. Ikhamera ye-32 MP, ebekwe kwindawo yenotshi yefowuni. Inzwa efanayo, kubonakala ngathi ubuncinci, esele sibonile kwezinye iimodeli ezimbini. Asazi nto ngevidiyo kwesi sixhobo okwangoku.
I-Huawei P30 Lite ine-3.340 mAh ibhetri amandla, ikwanenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza. Kwelinye icala, enkosi kubukho be-Android Pie kunye neprosesa yeKirin 710, kulindeleke ukuba isinike ukuzimela okuhle ngalo lonke ixesha. Kuba inkqubo yokusebenza inothotho lwezicwangciso zebhetri, ezivumela ukwenziwa kakuhle kwayo, ezinokuba luncedo olufanelekileyo kubasebenzisi. Kule meko, inzwa yeminwe yeminwe igcinwe ngasemva kwifowuni, ngokungafaniyo nesiphelo esiphakamileyo, apho sidityaniswe kwiscreen. Akukho nto ikhankanyiweyo malunga nokuvula ubuso kule modeli.
Okwangoku, inkampani uqobo aliqinisekisile ngexabiso lokuba le Huawei P30 Lite Ndiza kuba nayo kwintengiso. Nangona kunokwenzeka ukuba ubone ixabiso eliza kuba nalo kwezinye iivenkile eCanada. Ke sinokufumana into onokuyilindela xa ufika eSpain. Ukusukela eCanada inexabiso leedola ezingama-450.
Utshintsho lumalunga ne-399 euro, enokuba lixabiso eliya kumiliselwa ngalo le modeli eYurophu. Ngale ndlela, iya kuba lixabiso eliphezulu kunoko sikubonileyo kwimodeli yonyaka ophelileyo. Kodwa ukuphuculwa kweekhamera, kunye notshintsho kuyilo lube nefuthe koku. Nangona silinde isiqinisekiso esithile kwixabiso laso kungekudala.
Ikhutshwe kuhlobo olunye ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, i-6/128 GB. Ngokubhekisele kwimibala, ngokungafaniyo neemodeli zezolo, sikumibala emibini kuphela kule meko. Ngumthunzi weTwilight, onemibala eluhlaza okwesibhakabhaka kwaye owesibini ngumbala omnyama weklasikhi. Okwangoku asazi nto malunga nokwaziswa kwayo kwiivenkile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei P30 Lite ngoku isemthethweni
Izaphulelo kwiiMveliso zeKhaya zeKoogeek eAmazon